Prefektiora: “Henjanina ny sazy… | NewsMada
Prefektiora: “Henjanina ny sazy…
Par Taratra sur 20/01/2021
“Henjanina kokoa ny sazy, satria betsaka ny tsy miraharaha ny tenany sy tsy miraharaha ny hafa: manadio tatatra, manadio fanariam-pako, manadio lalana… Be loatra ny tsy manara-dalàna” hoy ny prefet de Police, Antananarivo, ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, omaly.
Tokony ho samy tonga saina ny tsirairay, ho samy tompon’andraikitra amin’ny tenany sy amin’ny fitsinjovana ny hafa amin’ny fanaovana arovava. Aleo mihatra ny fepetra sakana amin’ny fihanaky ny covid-19 na aiza na aiza: any anaty taxi-be, any amin’ny tranom-panjakana… Aleo samy sarotiny amin’ireo fepetra ahazoana mifehy ny valanaretina.
Mila fakana fahazoan-dalana ny hetsika rehetra ara-kolontsaina. Eo koa ny ara-pivavahana, raha tsy any am-piangonana no anaovana izany. Mbola mitoetra avokoa ireo fepetra sakana ara-pahasalamana rehetra amin’ny ady amin’ny fihanaky covid-19 any am-piangonana ho an’Antananarivo Renivohitra sy Analamanga toy ny fanasana tanana…